Soo dejisan Proxifier 3.28 Standard iyo Portable – Vessoft
Soo dejisan Proxifier
Proxifier – utility waxtar leh, oo u ogolaanaya in ay ka shaqeeyaan via server wakiil u ah barnaamijyada, in aadan haysan habkaani ah. Si toos ah Proxifier raad codsiyada ka soo codsiyada iyo redirects xidhiidhka. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u hubiyaan sirta, taageertaa macaamiisha mail badan oo awood u siineysaa inay diro ama la helo email iyada oo server wakiil ah. Barnaamijku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad la macaamiisha kala duwan, ay ka mid yihiin-daalacashada internetka, FTP, SSH, IRC, ICQ, macaamiisha P2P via shabakad kala internet-ka la gidaar shaqeeyaan. Proxifier kale oo ku jira qalab waxtar leh si ay ula socdaan xiriir shabakada.
Carar codsiyada iyada oo wakiil server
Taageerada loogu talagalay macaamiisha kala duwan
Waxaa fiiriyaan xiriir network
Qariyey ee IP-address
Comments on Proxifier:
Proxifier Software la xiriira:
English, Українська, Français, Español... The Bat! 7.3
العربية, English, Español, Português... PotPlayer 1.6.55390 iyo 1.6.55584 beta
English, Українська, Español, 中文... XMind 3.6.51